Madaxwayne ka tanaasulay dhalashadiisii Britishka – Radio Daljir
Diseenbar 17, 2018 5:08 b 0
Madaxwaynaha Ciraaq Berhaam Saalix ayaa ka tanaasulay dhalashadiisii Britishka, isagoo fulinaya sharciga dalkiisa ee dhigaya madaxwaynaha inuu wadan baasboor ajnabi ah, afhayenka madaxwaynaha ayaa sidaasi sheegay maalinimadii Axaddii.
“Isagoo u hogaansamaya sharciga , madaxwaynaha waxaa uu ka tanaasulay dhalashadii kalle ee Britishka ” ayuu yiri Luqmaan Fayli war qoraal ah oo lagu daabacay wakaaladda wararka Ciraaq ee INA.
Qodobka 18aad farqaddiisa afaraad ee dastuurka Ciraaq ayaa qeexaya ” Qof walba oo jago sare ka haya hay’adaha ammaanka iyo shaqooyinka kalle ee qaranka waa inuu ka tanaasulaa haddii dhalasho kalle uu haysto, si sharciga uu ugu hogaansamo” .
Madaxwaynaha Ciraaq oo xisbiga Kurdiga ku biiray sanadkii 1976dii ayaa musaafuris ugu maqnaa wadanka Ingiriiska, isagoona ka baxsaday xukun dil ah oo ay riday dowladdii madaxwaynihii hore Ciraaq Saadaam Xuseen, waxaana uu kusoo laabtay gobolkiisa Kurdistan kadib nidaamkii Saadaam Xuseen markii la riday, isagoona xilal kasoo Kurdistan, waxaana ugu dambayna madaxwaynaha Ciraaq uu noqday bishii October ee sanadkan.
Soomaaliya dastuurkeeda qabyada ah muddo ka badan 18 sano ayaa dhigaya in qof walba uu haysto dhalasho dal kalle oo laakiin Soomaali ah inuu qaban karro jagooyinka dalka sida madaxwayne ilaa jagooyinka ugu hooseeya, waxaana taasi ay keentaa masuul walba oo qaranka u shaqeeya marka uu xilka ka dago inuu ku laabto dalka uu Passportkiisa uu haysto.
Farriin Siyaasadeed: Farriinta Ammaanka ee Musharrax Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni